Wasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Bada oo digniin u dirtay kaluumeysatada Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Bada oo digniin u dirtay kaluumeysatada Soomaaliyeed
Muqdisho (SNTV) Digniintaan ka soo baxday Wasaaradda Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka Bada ayaa kusoo aadeysa xili lagu guda jira bad xiranka taasi oo ay suura galtahay in kaluumeeysatada ay dhibaatooyinka kala kulmaan gudaha bada.
haalkan ka soo baxay Wasaarada Kalumeysiga iyo Kheyraadka bada ayaa lagu sheegay in kaluumeeysatada Soomaaliyeed ay ka fijignaadan tagida meelaha fof-fog ee Bada gudaheeda iyada oo la ogyahay in kaluumeeystada anay haysan qalab ku filan sida ay sheegatay Nadiifo Maxamuud Yuusuf oo ah Agaasimaha Waaxda Cilmi baarista ee Wasaaradda Kaluumeysiga iyo kheyraadka bada.
Wasaaradda Kalumeysiga ayaa sheegatay in xilgaan anay haysan qalabkii logu bad baadin lahaa kaluumeysta xilyada badu ay kacsanatahay waxaana taasi oo ay sababtay burburkii uu dalka soo maray.
inta lagu guda jira xiliga Bad xeranka ayaay Kaluumeysatada Soomaaliyeed la kulmaan qasarooyin isugu jira Naf iyo Maal, waxana sheegayaa in hada gudaha Bada lagu waaysanyahay 3 Doomood iyo dhamanba dadkii saarnaa oo tira ahaan lagu qiyaasay 10 ruux, hase yeeshe dadka kaluumeysatada ah ayaa ka maarmin mihnadooda ku aadan soo jalaabashada kaluunka.
Previous articleRa’iisul wasaaraha Soomaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u dhoofay Norway.
Next articleCiidamada xooga dalka oo guula ka gaaray howlgalo ay ka sameeyay degaano ka tirsan Gobalka J/hoose